Iphelile iminyaka engama-25 belindile eNcwadi - Bayede News
Home » Iphelile iminyaka engama-25 belindile eNcwadi
Umphakathi ubona ukuvala umgwaqo umise yonke into kuyiyona ndlela ezokwenza kuzwakale izwe lawo
UMPHAKATHI waseNcwadi ngaphandle kwaseMgungundlovu ukhala ngokuba izinhlwa selokhu kwangena uHulumeni wentando yeningi njengoba sekuphele iminyaka engama-25 intuthuko ingabonwa endaweni. Lo mphakathi uvale umgwaqo uR617 ophakathi kweBulwer neBoston ushisa amathayi ukhala ngezimfuno. Uthi kwakungcono ngisho uHulumeni wobandlululo njengoba wakwazi ukubenzela okuncane. Izigodi ezithintekayo lapha iMagelekedle, iNcwadi, iDeepdale, iNhlambane neSongozima.
Ilungu lomphakathi elikhulume neBAYEDE uMnu u-Owen Mkhize lithe le ndawo esingaphansi kukaMasipala uMsunduzi kusukela ngowezi-2016, ngisho isengaphansi kukaMasipala iDkt uNkosazana MaDlamini–Zuma intuthuko ibilokhu ingabakhwekazi kule ndawo. Uthe ikhansela elalikhona lagcina ngokwakha imigwaqo emibili eyafakwa itiyela nayo ephelela phambi komuzi walo. UMkhize uqhube wathi kule inyaka egama-25 izwe lathola inkululeko umphakathi uyaqala ngqa ukubhikishela izimfuno njengoba ubusalokhu uhleli ethembeni lokuthi kuzolunga.“Size sikhetha ukuvala umgwaqo omkhulu nje yingoba sekungaphezu kwamandla. Le ndawo ayinalutho ongalucabanga oluyizidingongqangi okubalwa amanzi nemigwaqo. Njengoba kuzongena ihlobo nalo liza nezimvula, izimoto azizukwazi ukuphuma kule ndawo yaseNcwadi ngenxa yemigwaqo emibi okungahambeki kuyona.
“Kusukela ngowezi-1994 kuze kube yimanje sisahamba emigwaqeni ewubhuqu. Ngikhuluma nje kunemigwaqo emibili esanda kulungiswa ngamalungu omphakathi. Umphakathi uziphathela amapiki namafosholo uyomba imigwaqo okufanele engabe inakekelwa nguhulumeni. Okusikhathazayo selokhu le ndawo yangena ngaphansi kukaMasipala uMsunduzi eminyakeni emithathu edlule, siyezwa ukuthi kunemali eyingxenye yohlelo lwentuthuko edidiyelwe (IDP) ebekelwe ukuletha intuthuko kule ndawo. Nokho kuze kube yimanje akukho okusenzekile.”UGcwabe uphinde wananela ngokuthi akukho nohlelo lokuhlinzekelwa kwemiphakathi ngezindlu zemixhaso.
Nakuba umphakathi usube nemihlangano eminingana neMeya yedolobha uMnu uThemba Njilo, uthi ayikho incazelo ecacile osayitholile. Ngenxa yemigwaqo engekho esimweni esihle, imiphakathi ithi ihamba amabanga angamakhilomitha angacishe abe yi-15 nangaphezulu ukuze ikwazi ukufinyelela emgwaqeni omkhulu wamatekisi, njengoba amatekisi engangeni ngaphakathi ngenxa yesimo somgwaqo. Uma kunethile, izingane aziyi ezikoleni ngenxa yokuthi akuhambeki.
Ngaphezu kokuhamba lawa mabanga amade ukuze umphakathi uthole ezokuthutha, nemali yokugibela imba eqolo njengoba amatekisi ephoqeleka ukunyusa imali yokugibela minyaka yonke ngenxa yemigwaqo emibi. Kuyimanje umphakathi ukhokha imali engama-R39 uma iya edolobheni eMgungundlovu. Ngaphandle nje kwezinkinga zomgwaqo, le ndawo iphinde ibe nenkinga yamanzi, njengoba kwesinye isigodi izakhamuzi zisebenzisa amanzi aphuma ngaphansi kwebhuloho lapho kuhamba khona ujantshi wesitimela. Kwesinye isikhathi imiphakathi izimbela imigodi ukuze ikwazi ukukhongozela amanzi noma iye emifuleni nayo evamise ukungabi namanzi anele.
Ikhansela lendawo uNks uThandi Madondo ukuqinisekile ukuthi sekuphele iminyaka engama-25 le ndawo igqoza intuthuko, futhi eminyakeni engama-22 ingaphansi kukaMasipala iDkt uNkosazana MaDlamini Zuma owawaziwa nge-Ingwe phambilini, intuthuko ibingekho.Uthe: “Ngaphansi kukaMasipala uMsunduzi ziningi izinhlelo ezikhona zokuthuthukisa le ndawo njengoba kunohlelo lokwakhiwa kwezindlu, nedamu okuyimanje umasipala umatasa uyalilungisa ukuze abantu bakwazi ukuthola amanzi ahlanzekile aphuma empompini. UMnyango Wezokuthutha nawo usezinhlelweni zokulungisa imigwaqo.
Kunohlelo lokuhlinzekela abantu ngoJojo oseluqalile futhi olusazoqhubeka. Kule minyaka emithathu selokhu umasipala ethathe izintambo sekufakwe ugesi ukuze kukhanye emgwaqeni, kwakhiwa nemipheme yokukhoselisa abagibeli (bus shelters) nezindlu zangasese. Lokhu kukodwa nje kuyakhombisa ukuthi lukhulu uguquko olusazokwenzeka. Kuningi nje okunye okusazokwenzeka njengoba kusazolungiswa kabusha amapitsi amadala, kwakhiwe namasha.”
Okhulumela amaphoyisa akulesifundazwe uColonel Thembeka Mbhele ukuqinisekisile ukuthi bekunesiteleka sezimfuno kule ndawo ephakathi kwaseDeepdale naseNcwadi, okuze kwaphoqeleka ukuba amaphoyisa adubule ngezinhlamvu zenjoloba ukuhlakaza isixuku. Okhulumela uMasipala uMsunduzi uNks uThobeka Mafumbatha uthe: “Zikhona izinhlelo zokuthuthukisa le ndawo eseziqalile esingabala kuzo ukwakhiwa kwamapitsi amasha nokuhlinzekelwa komphakathi ngezimoto zamanzi. Kumanje uhlelo lokwakhiwa kwezindlu nokulungiswa kwemigwaqo luseqhulwini, njengoba kunezingxoxo eziphakathi kukamasipala noMnyango wezokuThutha. Asingakhohlwa futhi ukuthi umasipala uneminyaka emithathu nje vo uthathe le ndawo,” kuphetha uMafumbatha.
Bayede News Aug 2, 2019